dima | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
ATV ရင်းမြစ် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale POS ... (35189)
'01 1500 FI Drifter, အဘယ်သူမျှမမီးပွား - Kawasaki ဖိုရမ် (11003)
KTM ပြိုင်ပွဲဘလော့ (8085)
Kawasaki ZXR 750 - မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, သတင်း & Advi ... (7234)
ဟွန်ဒါ Wave ကို 125 လက်စွဲပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန်စာအုပ်များပြန်လည်ပြုပြင် (7212)
Peugeot မြန်နှုန်း Fight2အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလက်စွဲစာအုပ်ပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန် ... (7127)
Pampanga အဘိဓါန် Karylle Solana နိုင်ငံ H ကိုခုနှစ်တွင်အိမ်လော ... (5774)
ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166 (5623)
Кubric: Kawasaki | 20 ဇွန် 2015 | Comments Off on Kawasaki Ninja 650R 2012 အိန္ဒိယတွင်စျေး & အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
Kawasaki Ninja 650R 2012 အိန္ဒိယတွင်စျေး – အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Bajaj အော်တိုအားလုံးကိုအသစ်ကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် 2012 အဆိုပါ Kawasaki Ninja 650R အထူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းပြိုင်ပွဲ၏ထုတ်ဝေပြီးခဲ့သည့်အပတ်က. သင်၏ရှင်ဘုရင်သည်သတင်းအချက်အလက်အတွက် Bajaj ယခုအချိန်အထိရောင်းချပြီ 3,000 အဆိုပါ Ninja မိသားစုထဲမှာယူနစ်, ပထမဦးဆုံးအရာနှစ်အတွင်းစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည့် 2009. နောက်ဆုံးပေါ် 2012 မော်ဒယ်ဇွန်လအတွက်မိတ်ဆက် Ninja 650R ၏ပစ်လွှတ်အောက်ပါအတိုင်း 2011. ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုသိသည့်အတိုင်း, အဆိုပါ Kawasaki ရူပီးအကြားအရွယ်ရှိအဆိုပါအားကစားစက်ဘီးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်2သို့5တစ်ဦးကစျေးကွက်ဝေစုနှင့်အတူသိန်း 65 ရာခိုင်နှုန်းကို. ဒါက Kawasaki Ninja 250R နှင့် KTM ပြီးနောက်နိုင်ငံအတွင်းရှိမိတ်ဆက်တတိယပရီမီယံအားကစားမော်တာဆိုင်ကယ်ဖြစ်ပါတယ် 200 Duke. အဘယ်သူမျှမသံသယက၎င်း၏စတိုင်နှင့် configuration ကကုန်ကျစရိတ်ထက်ကျော်လွန်သွားပါလိမ့်မယ်. Kawasaki ...
Кubric: ဟွန်ဒါ | 20 ဇွန် 2015 | Comments Off on 2009 ဟွန်ဒါ CB1000R လမ်းမကြီးစမ်းသပ်ခြင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း- ဟွန်ဒါ CB1000R မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ
2009 ဟွန်ဒါ CB1000R - လမ်းမကြီးစမ်းသပ်မှုတားမြစ်ပျော်စရာ: သငျသညျမဝယ်နိုင်အကောင်းဆုံးဟွန်ဒါ! အလုပ်လုပ်တယ်တဲ့ကောင်းတဲ့ရဟတ်ယာဉ်ကိုတည်ဆောက်ဘို့ဟွန်ဒါဖို့ကျားကန်. ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုအစဉ်အဆက်အလွယ်ကူဆုံး-to-စီးနင်း Full-size ကို Two-ဘီးတဦးဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်တစ်ခု Auto-Trans-တပ်ဆင်ထားမော်တော်ဆိုင်ကယ် / Scooter ကဲ့သို့သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိရိယာတစ်ခုပေးခြင်းများအတွက်ဗိုလ်မှူးအကြွေး. ဒါပေမဲ့, ရိုးရိုးသားသား, ဟွန်ဒါ, သင်သည်အဘယ်ကြောင့်အကြှနျုပျတို့ကိုထုတ်ကိုင်ပြီးနေကြတယ်? စည်းချက်မြန်အီလက်ထရွန်နစ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဥရောပတိုက်တွင်ယင်း၏နိဒါန်းပေါ်မှာ CB1000R ရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်. တကယ်တော့, ဒီ CBR1000RR-based အဝတ်အချည်းစည်းစက်ဘီး 2008 ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစက်ဘီးစီးတစ်နှစ်တာမဲပေးအတွက်ဒုတိယပြီးဆုံး, အဆိုပါ U.S နှင့်ကျွန်တော်. သူစက်ဘီးဆုံးရှုံးနေကြပင်ထိုသို့မဲပေးရမပြုခဲ့! ဥရောပကျမ်းပြုဆရာထံမှတချို့ကမှတ်သားလောက်ကိုးကား? ဟွန်ဒါအတွက်အတွက် "တစ်ဦးကဧရာမခြေလှမ်း ...
Кubric: Moto Guzzi | 20 ဇွန် 2015 | Comments Off on ပြောက်: Moto Guzzi နော်ဝေအလှမယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
ပြောက်: Moto Guzzi Norge အဆိုပါ Moto Guzzi Norge အချို့သောအချိန်များအတွက် Tour စက်ဘီးငါ့အသိအမြင်၏အစွန်အဖျားပေါ်မှာခဲ့သည်. စျေးကွက်အပေါ်ပိုမိုဒီကဗျာမော်ဒယ်များတစ်ခုမှာ, ဒါကြောင့်လည်းအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်အများဆုံးလက်တွေ့ကျတဲ့တဦးဖြစ်ဖြစ်ပျက် - အပြင်းထန်ဆုံးတဦးလည်းပါလျှင်. သစ်တစ်ခုမော်ဒယ်ဒီအတိတ်တစ်နှစ်ဖြန့်ချိမှုနှင့်အတူ, ခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲမှာ Moto Guzzi ထားရန်မဆုတ်မနစ်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, အဆိုပါ Norge ပင်ယနေ့လူစည်ကား Tour ဈေးကွက်ထဲမှာလျစ်လျူရှုရန်မဖြစ်နိုင်ပေ. အများအပြားအီတလီမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကုမ္ပဏီကြီးများလိုပဲ, Moto Guzzi ယင်း၏အမွေအနှစ်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဂုဏ်ယူဖြစ်ပါသည်, နှင့် Norge တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အထူးတဦးတည်းရှိတယ်. ဒါဟာ GT ကို Norge ပြီးနောက်အမည်ရှိ, ကုမ္ပဏီ၏သဲ 1928 model – itself named for the airship that was ...
Кubric: Kawasaki | 20 ဇွန် 2015 | Comments Off on 2009 Kawasaki Vulcan Voyager 1700 ဆန်းစစ်ခြင်း – အဆုံးစွန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
2009 Kawasaki Vulcan Voyager 1700 | ဆန်းစစ်ခြင်း high-Tech မှ Classic အဝေးပြေးလမ်းမကြီးကနေတစ်ဦးခြောက်နှစ်ခွင့်ပြီးနောက်, Kawasaki အဆိုပါနည်းပညာအရှေ့သို့နှင့်အတူအပြည့်အဝစားဆင်ယင် Tour စျေးကွက် reentering ဖြစ်ပါတယ်, လွမ်းဆွတ် style, 2009 Voyager. Kawasaki သူတို့ရဲ့သစ်ကို Vulcan touting ဖြစ်ပါတယ် 1700 အဆိုပါ Cruiser အစိတ်အပိုင်းအတွက်ကုမ္ပဏီရဲ့အနာဂတ်များအတွက် bellwether အဖြစ်စီးရီး, နှင့် reimagined Voyager သူတို့ရဲ့အပျော်စီးလိုင်းရဲ့ luxe အထင်ကရအဖြစ်တာဝန်ထားပြီး. ၎င်း၏ရှည်လျားသော-လေဖြတ် 1700cc V-အမွှာအင်ဂျင်နှင့်မရှောင်သာ '' 60 ကြွက်သားကားတစ်စီးပုံစံ riffs နှင့်အတူ, အဆိုပါ 1700 Voyager အတွက်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကျော်ပျောက်ကွယ်သောအင်လိုင်းလေး Voyager XII တစ်ပြာအမေရိကန်ဝမ်းကွဲဆင်တူ 2003. The Voyager’s new Occidental wardrobe is the visual hook ...
Кubric: ဟွန်ဒါ | 20 ဇွန် 2015 | Comments Off on ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166
Honda 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166 အဆိုပါဟွန်ဒါ RC166 အပေါ်ဆက်ဖတ်ရန် 250/6. Grand Prix ပြိုင်ကားအစောပိုင်း 1960 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးတော်လှန်ရေးခံယူ. ဟွန်ဒါရဲ့ခြောက်ဆလင်ဒါလျင်မြန်စွာစုဝေးရောက်လာကြ၏. အဆိုပါဟွန်ဒါ RC166 ခြောက် Cylinder ၏အသံထွက်ကိုစစ်ဆေးပေါင်း crank အောက်က link ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု. တချိုမြိန်အသံဆိုင်ကယ်ဖြစ်ပါတယ်. ငါမရောက်မှီအလယျပိုငျး-အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်နှစ်ပေါင်းအပေါ်တဦးတည်းကိုကြား. ဒါဟာကိုစေလွှတ်. Le Mans ပေါင်းထုတ်လုပ်မှုစက်ဘီးဖို့ရော်ဘာအဖြစ်. ဟွန်ဒါသင်္ဘောခြောက်ဆလင်ဒါ DOHC ယင်း၏နဲ့အဖြစ်မှန် powerplant စေသွားလေ၏. ဟွန်ဒါနှင့်အတူ 1960 ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေတဲ့. တစ်ဦး 50 cc သုံးဆ, တစ်ဦး 125 cc ခြောက်လဆလင်ဒါပေါင်းတစ် V8. အခုသူတို့အချို့ရှိ5အဆိုပါဟွန်ဒါခြောက်လထက်မြင်းများကိုပိုမို. ၏ RC166 1967 ကဲ့သို့တူညီသောဆိုင်ကယ်ဖြစ်ပါတယ်. အဖြစ်ဟွန်ဒါ RC166 ခြောက်ဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် ...
Кubric: စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော | 20 ဇွန် 2015 | Comments Off on ပွိုငျဘမော်တော်ဆိုင်ကယ်
ပွိုငျဘမော်တော်ဆိုင်ကယ် အဆိုပါ Marque ၏သမိုင်းအကျဉ်း: ပွိုငျဘ အဆိုပါ Collier ကညီအစ်ကိုတွေအတွက်သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးစက်ကိုတညျဆောကျ 1899, က 1907 အဆိုပါကျွန်းက Man TT ၏လူမျိုးမှာအနိုင်ရခဲ့သည်. တစ်စက္ကန့်ရာအရပျကအောက်ပါ 1908, သူတို့နောက်တဖန်အနိုင်ရ 1909 နှင့် 1910. ပထမကမ္ဘာစစ်ထုတ်လုပ်မှု JAP နှင့် MAG နှစ်ဦးစလုံးထံမှအင်ဂျင်ကိုသုံးပြီးပြန်လည်စတင်ပြီးနောက် . Fri, May 24 2013 duhoda76wanadoo.fr ပြိုင်ပွဲပြင်သစ် jmpot ဗီဒီယိုကိုဗီဒီယိုက ပြင်သစ် april 2013 ကောင်းသောနေ့, ငါ့နာမကို JT Davis ကဖြစ်ပါတယ်, ငါဥဩမီဒီယာမှာတွဲဘက်ထုတ်လုပ်သူပေါ့ကျနော်တို့ငါးမိုင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပါလီမန်အဆောက်အထံမှတည်ရှိသည်. ကျနော်တို့သူကိုပြုပြင်ရေးနှင့်ပြုပြင်စပျစ်သီးကိုဆိုင်ကယ်စက်ပြင် ပတ်သက်. Discovery Channel ကိုအသစ်တစ်ခုစီးရီးကိုထုတ်လုပ်ကြသည်. ကျနော်တို့ခြောက်လ feature (6) bikes ...
Кubric: Moto Morini | 20 ဇွန် 2015 | Comments Off on Moto Morini Kanguro နှင့် Dart – ဂန္ထဝင်မော်တော်ဆိုင်ကယ် Roadtest – RealClassic.co.uk
Moto Morini Kanguro နှင့် Dart လူအများစုဟာလူသိများတဲ့ Morini အားကစားသို့မဟုတ် Strada မော်ဒယ်များတဦးအဘို့အဆူဖြိုးလေ့. ဒါပေမယ့်စကေး၏ဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးစွန်းမှာသငျသညျ super-ချောမွေ့ပြောင်လက် Dart ကိုရှာဖွေခြင်းနှင့် rufty-tufty Kanguro လိမ့်မယ်. ဒါကြောင့်ဘယ်လိုကဲန် Philp နှစ်ဦးစလုံးပိုင်ဆိုင်မှကြွလာခဲ့ပါဘူး? ကျွန်မပထမဦးဆုံးအတွက် Earl တရားရုံးမှာ Kanguro ကိုမြင်လျှင် 1982, ဒါကြောင့်တစ်ဦးကိုချွတ်-လမ်း V-အမွှာခဲ့သကဲ့သို့သဘောကျခဲ့သည်. ငါအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာရှိခဲ့ 1984, ဒါကြောင့်အများအပြားစက်ဘီးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့နှင့်ဤတဦးတည်းဝယ်ယူတယ်, NLM ဆိုင်ထဲမှာခဲ့သောပထမဦးဆုံး Kanguro. ငါကမှလိုချင်အခါတိုင်းပဲသွားထားရှိမည်! ဒါဟာချွတ်-လမ်းငါ့ကိုအပျော်အပါးတွေအများကြီးပေးခဲ့တယ်, ၎င်း၏အလေးချိန်၏ကြားမှ, ငါ shortie ပေါ့ – 5'' 5. ငါသာထဲမှာဖယ်ရှားပစ်တယ် 2003 ငါသာရှိသည်ကြောင့် 15% အဆုတ်စွမ်းရည်ယခု. ...
Кubric: Big Dog | 20 ဇွန် 2015 | Comments Off on 2004 Big Dog Ridgeback Motortrend
ကိုယ့်အခြား WordPress.com ဘလော့ဂျ 2004 Big Dog Ridgeback Fonzie ပြောပါတယ်: ငါ Ridgeback စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်တွေ့ရှိ, ဟောက်ခြင်းနှင့်ကျောရိုးဉျြးဖဉျြး - ပြန်, ့အတူတူရမ်းပြီးငါ့အကျောရိုး discs တွေကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ, (အကောင်းတစ်လမ်းအတွက်) - တင်းကျပ်ရဟတ်ယာဉ်အဆင်ပြေဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်နှင့် Hard-assed biker အမျိုးအစားများကိုတစ်ဦး raucous ၎င်းတို့၏နာကျင်မှုသည်းခံစိတ်ကိုပြလိုခြင်းနှင့်အကြီးအကျယ် kinda လမ်း chromed ကြသည်မဟုတ်. ဟုတ်ကဲ့, ငါ Motorcycle.Com တကယ် biker နောက်ဆုံးပေါ်သံမြင်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးဖတ်ရှုဖို့လာရာအရပ်မဟုတ်ကြောင်းကိုငါသိ၏, ငါကကူညီပေးနိုင်ပါသည်လျှင်မူကား၎င်းတို့သည်လိမ့်မည်. သင် Concours ချစ်နိုင်မည်ဆိုပါကမော်တော်ဆိုင်ကယ်ဆိုင်ကယ်ဖြစ်ကြပြီး, တစ်ချိန်တည်းမှာကပွုနေစဉ်, you probably understand where those of us in the chopper world are coming ...
Кubric: KTM | 20 ဇွန် 2015 | Comments Off on KTM 450 အမိန့်ချီတက်ပွဲပုံတူရှိနိုင် – မော်တော်ဆိုင်ကယ်ယူအက်စ်အေ
KTM 450 အမိန့်ချီတက်ပွဲပုံတူရှိနိုင် အဆိုပါ KTM 450 ဆန္ဒပြပွဲပုံတူမကြာမီအများပြည်သူရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်အမေရိကန်ကမှလာမယ့်ပါလိမ့်မည်လျှင်မူကားကမရှင်းလင်းမယ့်. KTM သည်၎င်း၏ 13 နှစ်ဆက်တိုက် Dakar ပြိုင်ပွဲများတွင်အနိုင်ရ notched 2014, မာ့ခ်မေ့မြောနီးပါးနှစ်နာရီရှေ့ကသူ၏အရင်းနှီးဆုံးယှဉ်ပြိုင်ပြီးသွားနှင့်အတူ. အဆိုပါစပိန်ရဲ့လက်နက် KTM ရဲ့တစ်ဦး updated version ကိုခဲ့သည် 450 ဆန္ဒပြစက်ဘီး, လိမ္မော်ရောင်အမှတ်တံဆိပ်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ရာ၏ version တစ်ခုမကြာမီအများပြည်သူရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါ KTM 450 ဆန္ဒပြပွဲပုံတူတဲ့ဒီဇိုင်းသည် frame နှင့် updated Ergonomics features, အသစ်ကနောက်ဘက်ရပ်ဆိုင်းမှုနှင့်ပြိုင်ပွဲ-သက်သေပြ, လောင်စာဆီ-ထိုးသွင်း 450cc အင်ဂျင်ကို. For rally duty the Replica comes withafront and rear fuel-pump and multiple tanks as ...
Кubric: Agusta | 20 ဇွန် 2015 | Comments Off on 2013 သင်္ဘော MV Agusta F3 ပထမဦးစွာစီးနင် – Tampa ဂလားပင်လယ်အော်၏ယူရို Cycle
2013 သင်္ဘော MV Agusta F3 ပထမဦးစွာစီးနင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ sportbike ရောင်းအားအခုထက်၏မျက်နှာကိုအတွက်, Boutique အီတလီမော်တော်ဆိုင်ကယ်အမှတ်တံဆိပ်သင်္ဘော MV Agusta က၎င်း၏မကြာသေးမီကဖြန့်ချိ F3 အတူဝင်ပြီး middleweight supersport စျေးကွက်အားကောင်းလာစေပြီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်. တစ်ဦး Ultra-ကျစ်လစ်သိပ်သည်း 675cc သုံးဆ-ဆလင်ဒါအင်ဂျင်ကိုအားဖြင့် Powered, အဆိုပါ F3 ($13,999) အထွတ်အနေဖြင့်အထွတ်မှရောက်လာရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအပေါ်အခြားဥရောပယူဖြစ်ပါသည်. ဗွီး Reality လာ လေးနှစ်အစောပိုင်းကမွေးဖွားခဲ့ပြီး, အဆိုပါ F3 သင်္ဘော MV ရဲ့နှောင်းပိုင်းတွင်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့အိပ်မက်ဖြစ်ပါသည်, Claudio Castiglioni, အဘယ်သူသည်ကင်ဆာမှသည်ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီရွေ့သွားကွယ်ပျောက်မတိုင်မီသုံးဆလင်ဒါ sportbike ပြန်တမ်း. လမ်းပြိုင်ကားအတွက်၎င်း၏နက်ရှိုင်းစွာအမြစ်တွယ်သမိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား, the machine was designed for competition and the demands of World Supersport ...
Moto Guzzi 1000 Daytona Injection အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် ဆူဇူကီး AN 650 KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး Ducati 60 ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် Ducati Desmosedici GP11 Aprilia Mana 850 စက်ဘီး Kawasaki ER-6n မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto Brammo Enertia စမတ် eScooter သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix ဆူဇူကီး Colleda CO ဟွန်ဒါ DN-01 Bajaj Discover ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down Ducati Diavel ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို